E-mail: info@camtechcircuits.com Ekwentị: +86 13713989501 Anyị na-akparịta ụka: +86 13713989501
Nchekwa onwe, ọgwụ & bọọdụ PCB aerospace
Nkwurịta Okwu PCB Circuits
Ahịa Elektrọnik PCB
Security PCB na sekit na sekit
Sava & Nchekwa PC Board
Ndị ọzọ PCb
Anyị emeriwo ọtụtụ asambodo maka ngwaahịa anyị n'ihe gbasara ogo na ihe ọhụrụ.
CAMTECH PCB bụ mba, ọkachamara na a pụrụ ịdabere na PCB soplaya na onwe mmepụta isi nke dị na Shenzhen, Zhuhai China, nke na-elekwasị anya na exporting PCBs ka tumadi European na North American ahịa. CAMTECH PCB wаѕ guzobere na 2002, nwere ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ atọ PCB na FPC na Shenzhen, obodo Zhuhai, yana ihe karịrị ndị ọrụ 3000, ikike mmepụta kwa afọ karịrị 1500,000 m². ikike na centralized akụ na mpaghara, anyị nwere ike na-enye gị onye-nkwụsị ọrụ na obere, ọkara ka uka mmepụta na asọmpi okwu, àgwà na nnyefe obi ike na ahaziri niile gị request.Our ngwaahịa na-ebe etinyere na nche
& agbachitere, ulo oru akara, nkwukọrịta, ọgwụ ngwá, akpakanamde Electronics wdg CAMTECH PCB meriwo a elu ude si n'ụwa nile ahịa.
E wezụga nke ahụ, anyị nwere ndị ọrụ aka ọrụ ọkachamara na ahụmịhe nke ọma iji kwadoo gị maka ọrụ agbakwunyere nke PCBA SMT na BOM sourcing. Anyị nwere ike ịkwado maka mmepụta obere-ọkara-n'ụzọ dị mfe yana nzaghachi ngwa ngwa na ọrụ ọkachamara.
Iji Nye High Quality E Bipụtara Circuit Products Na Afọ Ojuju Service Iji Ọdụdọ na Ozi Mmeputa
Iji ghọọ ndị kasị pụrụ ịdabere na biri ebi sekit osisi emeputa na ụwa
Corekpụrụ anyị bara uru
Ndị ahịa ented Na-ahụ Maka Ndị Okike Bara Uru Ref Nlebara Anya Onwe 、 Iguzosi Ike n'Ezi Ihe
Ibu Ọrụ 、 Nkwado 、 Innovation
Ihe omuma ihe omuma anyi
Ndị mmadụ, n'ichepụta ngwaahịa asọmpi, ịgbasa ụlọ ọrụ ahụ, na ịkwụghachi ọha mmadụ
Anyị na-agba mbọ na-amị nke kacha mma mma ngwaahịa na ndị kasị asọmpi ahịa. Ya mere, anyị ji obi anyị niile na-akpọ ụlọ ọrụ niile nwere mmasị ka kpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ihe ọmụma.
Ọ B IFR YOU na INWORE ỌZỌ AJSJ, Dee anyị